Vy Structure, vy Structure Design, efa voarafitra mialoha House - Join
toeram-piompiana akoho amam-borona
Light trano vy miaina
Steel structure trano
Structure vy mialoha trano fanatobiana entana
Metal Steel Structure Building Atrikasa
Strong ekipa ara-teknika
Ny ara-teknika JOIN am-polony taona ny ekipa manana traikefa ao amin'ny orinasa, miaraka amin'ny matanjaka ara-teknika sy ny traikefa matihanina. Ny tsara dia tsara kalitao sy ny fenitra endrika mamela ny fananganana avo-tsara, avo-fahombiazana, fitaovana manan-tsaina.
JOIN high quality vokatra, famokarana fitsipika, ary ny mpanjifa no antoka ny toerana ho toy ny mpitarika orinasa. Mba hahazoana antoka izany fitsipika izany dia mitohy ho nihaona, biraon'ny sampana sy ny mpizara no stratejika nametraka-up manerana an'i Shina.
Izy io dia ny fanoloran-tena tsara JOIN mpanjifa izay miantoka fa samy mialoha sy aorian'ny-fanompoana ny fivarotana sy ny fanabeazana ho nomena mba hanampiana anao hahafantatra sy hampiasa ny vokatra haingana kokoa sy tsara.
Any in Qingdao, JOIN ny varotra sy ny orinasa ekipa miantehitra amin 'ny rafitra fitantanana Integrated izay manome rehetra-manodidina fanompoana ny mpanjifa, avy mialoha fivarotana ny post-fivarotana fanompoana. Ny orinasa fanampiny, Qing Dao JOIN Steel Structure Co., Ltd, miala-key manolotra fanompoana ho an'ny rafitra Steel orinasa mpamokatra entana ho an'ny orinasa fampiasana, AGRI-trano lanjany, sy noforonina talohan'ny-trano ho an'ny tsy miankina Estates. Ny niavaka injeniera, hita ao amin'ny birao foibe Shanghai, fitantanana ny FABRICATION atrikasa sy hanome anjara-fanompoana manan-danja ho an'ny mpanjifa.
Steel Structure Building ny atrikasa
Steel Prefab Chicken House In akoho amam-borona Farm
TEC Lahateny: Ny Latest amin'ny akoho amam-borona Technolo ...
"Akoho amam-borona Industry afaka mamorona 30.000 ...